02 Febroary, 2009 08:58
Tsy mahay mandray lesona avy amin’ny tantara isika Malagasy. Indrisy !!
Taona 1972, 1991, 2002, 2009 dia sasatry ny nandrava sy nandrodana ary manangana hatrany isika Malagasy. Tsy mandroso anefa isika amin’izany fa mihemotra foana. Menatra mahita ny fandrosoan’ny toe-karen’ireo Nosy kely aty amin’ny fari-dranomasin’ny Oseana Indiana misy antsika (Maurice, La Reunion,..)
Firenena voahozona ve isika sa diso mitady ny manganana ka mahita ny afero lava ?
Ny fahapotehan’ny toe-karena tamin’ireo vanim-potoana voalazako eo ambony ireo dia lesona omen’ny tantara antsika fa tsy tokony hatao ary ialana toy ny fasam-bao ny "fikomiana".
Ny toe-tsain’ny mpitondra tia tena sy manjakazaka ary manao kely tsy mba mamindro dia lesona omen’ny tantara antsika fa fahalovana mambotry vahoaka.
Efa hita fa nahafatesana olona maro hatrany ny fampijoroana “governemanta mpikomiana” (Gouvernement insurrectionnel) sy “fanambaran-tena ho mpitondra” (Autoproclamation) dia lesona omen’ny tantara antsika fa tsy mahasoa.
Nahoana ary no miverina hatrany ny tantaran-tsika ?
Tsy ny fitakiana tamin’ny 1972, 1991, 2002, 2009 velively akory no tsy MARINA sy MAZAVA fa izay mahazo fitondrana dia minia manadino izany fitakiana maha olona izany (Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosoana).
Ny fanehoan-kevitro teto hatramin’izay dia ny fandalana hatrany ny fifampiresahana (Dialogue) eo amin’ny samy olombelona, fa indrindra ny samy Malagasy. Tsy biby isika ka hifandramatra na hifanoto.
Ankoatra izay dia tsarovy fa “ho voaozona izay olona matoky olona” (Jeremia 17: 5a) fa “hotahina kosa izay olona matoky an’i Jehovah” (Jeremia 17: 7a).
24 Janoary, 2009 16:17
Mazava ny tenin'ny Ben'ny Tanàna Antananarivo Renivohitra Andry Rajoelina tetsy amin'ny Kianjan'ny Demokrasia (Ambohijatovo) sy teo amin'ny Kiajan'ny 13 Mey (Analakely) androany Sabotsy 24 Janoary 2009:"Miala ny governemanta Rabemananjara".
Nanohy ny teniny ny "Zandrikely":"Vonona hitantana ny tetezamita ny tenako Andry Rajoelina". "Rehefa isika no mitantana dia hamidy avy hatrany ny fiaramanidina "Air Force One II". "Manomboka amin'ny Alatsinainy 26 Janoary 2009 dia mifamontoana eto amin'ny "Kianjan'ny 13 Mey" amin'izay isika mandram-pialan'ny governemanta". Hoby, tehaka, sioka, horakoraka tsy ifandrenesana no nanakoako. "Sao hisy hilaza indray amin'ny gazety rahampitso fa manongam-panjakana i Andry Rajoelina: tsia tsy manongam-panjakana isika fa ny vahoaka no nametraka ny mpitondra dia izy ihany no manala"."Tokony hahay haka lesona ny mpitondra".
Maro ny zava-boalaza androany fa nasongadiko ireo teny ireo.
Omeko anareo ny sary nalaiko tamin'izany "andro iray manan-tantara" izany mba ho aingon'izao lahatsoratro izao.
- Jereo ity lahatsoratra ity "Cohabitations". Raha ny Ben'ny Tanàna sy ny Filoha no voaresako, hay ilay ohatra noraisiko no ho tanteraka (Président sy Premier Ministre) ??
- Sary nalain'ny tebokaefatra
16 Janoary, 2009 13:19
Inona no hiseho eo amin’ny « Kianjan’ny Demokrasia » Ambohijatovo rahampitso Asabotsy 17 Janoary 2009, amin’ny fotoana hanokanana izany kianja izany ?. Ho tonga maro hanohina ny antson’ny Ben’ny Tanàna Andry Rajoelina ve ny olona ? Hirongo fitaovam-piadiana hanakana izany ve ny mpitandro filaminana ? Iza no ho voasambotra sy higadra ? Hisy maty sy maratra ve ? Hizotra araka izay nieritreretan’ny Ben’ny Tanàna azy ve ka hody am-pilaminana ny rehetra ?…..Eo anoloan’izany fanontaniana tsy ahitam-baliny mazava izany dia aleo ny fotoana ho avy no hamaly azy.
Ny zava-misy eo amin’ny Ravalomanana sy Rajoelina izao dia mampahatsiahy ahy ny zava-nisy teo amin’ny Francois Mitterrand (Parti Socialiste) sy Jacques Chirac (RPR), teo amin’ny Jacques Chirac sy Lionel Jospin (Parti Socialiste), teo amin’ny Didier Ratsiraka (Arema) sy Marc Ravalomanana (Tiako Iarivo)…
Inona no tiako holazaina: olona tsy iray antoko ireo fa samy nanana ny azy, sy samy nanana ny andraikiny nefa noteren’ny vahoaka (fifidianana) hiara-hiasa. Io ilay antsoina hoe “cohabitations”. Ny « cohabitations » tsy midika hoe foana ny maha izy azy ny tsirairay fa rehefa tombotsoa iombonana kosa dia iraisana sy mifanome tànana, alevina ny fifandirana sy tsy fitovian-kevitra. Mila fahaizana « diplomatie » io.
Samy Frantsay ary samy Malagasy ireo ohatra noraisiko teo ambony ireo ka mahaiza miara-monina sy miara-miasa ary maka tahaka ry Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina.